Guddoomiye Taabid oo ka hadlay maqaamka caasimadda iyo arrimo kale
Saturday January 13, 2018 - 18:51:52 in Wararka by Mogadishu Times
Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa iftiimiyay dhowr waxyaabood oo shaki laga qabay maalmihii lasoo dhaafay, kadib wareysi gaar ah oo uu siiyay TV-ga Horn Cable. Taabid oo ah siyaasi dhalinyaro ah ayaa noqday mid ka mid ah shaqsiyaadka ugu saa
Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa iftiimiyay dhowr waxyaabood oo shaki laga qabay maalmihii lasoo dhaafay, kadib wareysi gaar ah oo uu siiyay TV-ga Horn Cable. Taabid oo ah siyaasi dhalinyaro ah ayaa noqday mid ka mid ah shaqsiyaadka ugu saameynta ee dowladda, waxaa jiray guux xoogan oo ku aadan maqaamka caasimadda oo soo ifbaxay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay, hadaba waxaan soo koobay jawaabihii ugu xiisaha badnaa ee ku jiray wareysigaan.
Duqa Muqdisho wuxuu sheegay in qof walba oo gobalka Banaadir madax u noqda uu lahaan doono wax lagu xasuusto "maamulkeyga waxaa lagu xasuusan doonaa inuu dhiso bulshadda gobalka Banaadir, xagga wadaniyadda iyo iney dareemaan lahaansho”.
Taabid wuxuu qabaa iney muqadas tahay iney caasimaddu yeelatay maqaam gaar ah, arintaan waxey hortaalaa labadda Aqal ee Baarlamanka Somalia " Saddex milyan oo qof oo gobalkaan ku nool macquul ma’ahan iney noqdaan matalaad la’aan, labadda Aqal waxaan hor dhigi doonaan aragtidda dadka gobalkaan iyo sidda ay wax u rabaan ayuu yiri Duqa Muqdisho.
Gudoomiye Taabid wuxuu yiri "Mar walba waa inaan xushmeynaa aragtidda qof walba uu qabo ,laakiin aniggu waxaan aaminsanahay iney waajib tahay iney caasimaddu yeelato maqaam gaar ah”. Wuxuu dhinac isaga riixay wararka sheegaya inuu rabbo dhismaha maamul goboleed gaar ah "Labadda Aqal oo Soomaali ay ku dhantahay ayaa laga sugaya xuquuqda shacabka caasimadda ku nool ayuu hadalkiisa ku daray.
Duqa caasimadda wuxuu qabaa in qurba joogta Soomaaliddu aaney la mid aheyn dadka kale ee aduunka oo ay yihiin dad dalkooda iyo dadkoodda aad uga war haya " Waxey ahaayeen dad mar walba imaan jiray dalka ,kana shaqeyn jiray oo caawin jiray bulshadda sidaas ayaana ku doortay ayuu yiri Taabid Cabdi.